रबि ओडकी आमा बितेपछि अस्मिताले रुदै यस्तो भनिन् ! जस्ले सबैलाई रुवायो भिडियो शेयर अवश्य गरौ – PathivaraOnline
Home > भिडियो > रबि ओडकी आमा बितेपछि अस्मिताले रुदै यस्तो भनिन् ! जस्ले सबैलाई रुवायो भिडियो शेयर अवश्य गरौ
admin December 27, 2018 December 27, 2018 भिडियो, समाचार	0
रबि ओडकी आमा बितेपछि अस्मिता अधिकारीले रुदै यस्तो भनिन् ! जस्ले सबैलाई रुवायो (भिडियो सहित) भिडियो शेयर अवश्य गरौ ।सहित)काठमाडौं – कहिले काही जिन्दगीमा यस्तो मोड आउँछ जुन खुसी र दुःख एकै पटक पर्छ । हो, त्यस्तै भएको छ, नेपाल आईडल सिजन २ का बिजेता रबि ओडलाई । रवि ओडलाई मातृशोक परेको प्रति नेपाल आइडलका फाइनलिष्ट सुमित पाठकले पनि दुख व्यक्त गरेका छन्। सुमित पाठकले भनेका छन्
– “आमा,हार्दिक श्रद्धाञ्जलिहजुरको बैकुण्ठ बास होस् हजुरको सपना हामि मिलेर पुरा गर्ने छौँ, रवि, बुबा, भाईबहिनीहरु, परिवार, आफन्तजन सम्पूर्णमा धैर्यधारण गर्न शत्ति प्राप्त होस् ।”
विष्णा रविकी कान्छी आमा हुन् यता नेपाल आईडलकै टप ४ मा पर्न सफल प्रतिस्पर्धी अस्मिता अधिकारीले आफ्नो फेसबुकमा यस्तो दुखद स्ट्याटस लेखिन् कि उनको लेखाई देखेर सबै भावुक बने । चर्चित हास्य कलाकार जीतु नेपालले पनि रबि ओडकी आमाको निधनले दुखी बनाएको लेखे । जितुले भने ः अस्ति मात्र रमाईलो गरेर मुन्द्रेको कमेडी क्लव खिचियो आजै यस्तो भयो ।
कुवेतमा एक नेपाली चेलिलाई घर मालिकले कोठा बन्द गरेर कुटपिट गरि हत्या – तस्विर सहित पुरा हेरी सक्दो शेयर गर्नुहोस